Tabarucaad loo baahan yahay – Abschir Hassan Foundation
Tabarucaad loo baahan yahay
Waxaad raadineysaa shaqo macna leh oo aad jeclaan lahayd inaad caawiso dadka kale isku mar?
Kadib waxaad xaqiiqda naga haysataa annaga iyo aasaaskeena carruurta iyo dhallinyarada naafada ah. Naga caawi si loo hagaajiyo xaaladaha nololeed ee carruurta naafada ah iyo dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waxaan bixinnaa siyaabo kala duwan oo tabaruc ah. Waxaad naga caawin kartaa khibradaada iyo xikmadaada. Sida aasaaska dhallinyaradu, waxaanu aqbalnaa gacan ku caawinta deeqdeena. Waxaan sidoo kale raadineynaa mutadawiciin ahaan naqshadeynta qaabka sawireynta iyo fiidiyowga fiidiyowga
Haddii aad xiiseyneysid, waxaan rajeyneynaa inaan helno codsi macno leh annagoo isticmaalayna e-mail.